I-Ayurveda kunye neYoga Eco-resort - I-Airbnb
I-Ayurveda kunye neYoga Eco-resort
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguAyushkamy
Izindlu zakwa-Ayushkamy ezilungele ukuphilisana kwendalo zibekwe phakathi kwamanzi angasemva kunye nolwandle lwaseArabia kuMazantsi eIndiya. Sinikezela ngoxolo kunye nokuzola kwisixeko esiphithizelayo, imbono yepanoramic yezityalo ezishinyeneyo zaseKerala, ukufikelela ngokuthe ngqo elwandle, kunye nendlela epheleleyo.
Unikezelo lwethu kuwe lubonelelo ngendawo yokuhlala engenaxinzelelo eyilelwe ukuba ibe "likhaya elikude nekhaya" apho ungaziqhelanisa khona neYoga kwaye ulandele indlela yokuphila ye-Ayurveda ukuze uphinde uhlaziyeke kuxinzelelo lobomi kunye nokubuyisela ibhalansi yakho yangaphakathi.
4.92 · Izimvo eziyi-36
Indawo esikuyo ivakala ikude nesiphithiphithi sesixeko, nangona sikumganyana omfutshane ukuba uyaphoswa ngulo msebenzi! Abahlali basekhaya banobubele kwaye bamkelekile, ulwandle lwethu namanzi acocekile.
Sikwakufutshane nePanmana Ashram.
Umbuki zindwendwe ngu- Ayushkamy
Samkela wonke umntu kwindawo yethu ngokungathi lusapho, ngonxibelelwano oluninzi okanye oluncinci njengoko sifuna. Ubumfihlo bufumaneka ngokulula kwaye buhlonitshwe.
Sinazo iilabradors ezimbini ezinobuhlobo ezihlala kwipropathi.